Maitiro ekuvandudza iwo magiraidhi mu macOS High Sierra nekuda kweMetal 2 | Ndinobva mac
Mavhiki maviri chete apfuura Apple yakaunza masystem ayo matsva ekushandisa kune ese zvigadzirwa paWWDC 2017. ZveMac, macOS High Sierra yakaunzwa, yakavandudzwa vhezheni yeOS yayo uye izvo pasina mubvunzo zvichaita kuti tinakidzwe nemakomputa edu zvizere, tichishandisa mukana wavo uzere nekuita.
Pakati pezvinhu zvitsva zvakaunzwa, izvo zvakatoratidzwa pano, Nhasi tinoda kutaura nezveMetal 2, pasuru iyo inokutendera iwe kushandisa nekuvandudza graphic mhando yemakomputa ese ane macOS High Sierra yakaiswa. Asi ngatione zvakadzama izvo chaizvo iyi yechipiri vhezheni yesimbi inotisvitsa.
Kutenda kuMetal 2, komputa yedu ichave nayo kunongedza kwakananga kune iyo grafiti yekugadzirisa unit (GPU), kuti tikwanise kuwedzera kuita kwemifananidzo uye zvinoenderana nekwaniso yezvishandiso zvinomhanya paMac yedu.Nechikonzero ichi, Metal 2 inowedzera mashandiro zvakanyanya, ichibvumira iyo GPU kutora kukosha kukuru mukuitwa kwechirongwa chega chega chiri kushandiswa.
Beyond mifananidzo, Metal 2 inopa vanogadzira akati wandei emapakeji uye maturusi ekurerutsa kugadzirisa, kuitwa kwezvirongwa uye kusimudzira mune zvakawandisa zvechimwe chishandiso chitsva. Nenzira iyi, zvikwata zvinoshanda kupa maturusi nemhinduro kuvashandisi zvinokwanisa kushandisa zvirinani zviwanikwa zvinopihwa nechikwata chedu, vachigadzirisa kuuraya kuchaitika ipapo.
Uye zvakare, izvozvi zvakare zvinogoneka kuti chikamu chekodhi uye algorithms kuitwe zvakananga paGPU, pasina kumirira iyo CPU, Naizvozvo, kuwanda kwemaitiro akambodzora kudzora pane imwe nguva mukushandisa akagadziridzwa.
Sezvo isu tadaidza pamusoro, Metal 2 zvakare inopa rutsigiro rwe Virtual Reality kupa, zvakare ichipa maAPIs matsva uye optimizations yekukurumidza kuiswa kweaya matekinoroji mune yechitatu-bato kunyorera.
Iyo zvakare inopa maturusi matsva anovhura mikana mitsva uye nzira dzekuverenga mitoro yebasa muchikumbiro, pamwe nekugadzirisa graphical parameter uye zvimwe zvakawanda. Hapana mubvunzo budiriro mukuvandudza kwekuita yezvinhu zvatinazvo mukombuta yedu, ichibvumira kuurayiwa kuitwe zviri nyore uye nokudaro nekuwedzera kugona kwemuchina wedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Maitiro ekuvandudza iwo magiraidhi mu macOS High Sierra nekuda kweMetal 2
Namatira, smart clipboard, ikozvino pahafu yemutengo